thank u for publishing.................................
--आमा ! अब फर्किन्छु हलो जोत्न स्वदेशमै
भनी गजल वेदनाका लेख्दै छु म विदेशमा---
मन छुने मार्मिक गजल !
निरन्तरताको शुभ कामना .
मलाई कैले काहीं त्यस्तै लाग्छ,बिदेशमा सपना देख्नु भन्दा स्वदेशमा हलो जोत्नु बेश। त्यसलाई गजलकै रुपमा कृष्णजी ले प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। गजल राम्रो लाग्यो। साच्चै तपाईको उपनाम काल्सको माने चाहीं के हो नि?
बिदेशमा धनकमाउने सपना is like lakshmi prasad devkota ko lahsa.